Kuratidza zvinyorwa neelebheri Kacanovi
Statue yaSt. George Drake
St George's sandstone zvakavezwa zvinobva ku1806, zvichida naJan Chládek Jr ..
Mune 1884, František Jiroš nemudzimai wake Petronila vaiva nepinth itsva yakaitwa naJosef Zeman weTatobit. Icho chidziro chinoshongedzwa nekuzorora kumwe kune rumwe rutivi: Kristu mubindu reGetsemane, vaviri veVatendi Petronila naFellicula, Mary Magdalene uye Saint Anna.
Parizvino, kopi yakanyorwa naJiří Novák iri panzvimbo ipapo. Chifananidzo chepakutanga chiri mune vetibule yeMuseum yeBohemian Paradise mu Turnov.
Dombo rinoregedza pedyo nepurazi raKopic
Mumatombo pazasi pepurazi raKopic, Jirošová rychta, iye aimbove muridzi uye wevashandi vemuimbi Vojtěch Kopic akagadzira imba yekutandarira yedombo, kunyanya kubva kuCzech nhoroondo. Basa rake rakagara makore anoda kusvika makumi mana (40 kusvika 1940) uye munguva iyoyo pamusoro pemakumi matatu zororo rehuwandu, mhuka kana ma facade ezvivakwa akagadzirwa, kazhinji achiwedzeredzwa nekutora kana mameseji.
Vojtěch Kopic (1909-1978) akaroora chivakwa muna 1932. Kubva pamakumi mana kusvika parufu rwake mumupata uri pasi pepurazi akaverengera zororo muzhanje dzejecha, iwo madingindira aakatora kubva munhoroondo yeCzech. Kuchengetedzwa kwechiratidzo cheiyi mabasa kwakaziviswa kubva musi wa25 Mbudzi 2017 muchimiro chenzvimbo yekudzivirirwa yeCopicův statek tsika yechivezwa.
Njanji yakamirirwa inokutora pamwe neyezororo, iyo-nzvimbo-yakatarwa inoiswa nemasaini evashanyi.
Kopicův statek (aimbova Jirošova rychta) yakavakirwa dzimba kubva pakupera kwezana ramakore rechigumi nemasere, chiumbwa chetsika. Izvi ndizvo (pamwe chete, semuenzaniso, purazi raDlask) imwe yemhando dzinonakidza dzekuumbwa kwevanhu yeiyo Pojizerký mhando. Shamba (Kacan…